भोजपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२७ पुग्यो, कुन पालिकामा कति ? — KhabarTweet::Nepali online news portal भोजपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२७ पुग्यो, कुन पालिकामा कति ? — KhabarTweet
भोजपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२७ पुग्यो, कुन पालिकामा कति ?
भोजपुर, ७ जेठ- भोजपुरमा दोस्रो लहरमा कोभिड १९ वाट संक्रमित हुनेको संख्या १ सय २७ पुगेको छ । आज १५ संक्रमित थपिएसँगै भोजपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २७ पुगेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरका सुचना अधिकारी सुरेन्द्र कुमार बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
दोस्रो लहरको कोभिड १९ मा जम्मा २ सय ६८ जनाको पिसिआर संकलन गरिएको छ । २ सय २८ को पिसिआर रिपोर्ट आएकोमा ८३ जनाको को कोरोना पोजेटिभ आएको हो । २९जनाको रिपोर्ट आउन वाँकी रहेको जिल्ला स्जाथ्य कार्यालयले जनाएको छ । हाल सम्म भोजपुरमा एन्टिजेन्ट परिक्षण विधिवाट ९९ जनाको परिक्षण गरिएकोमा ४६ जनाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
भोजपुरमा हाल सम्म सवैभन्दा धेरै षडानन्द नगरपालिकामा कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । षडानन्दमा ४६ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने साल्पा सिलिछोंमा कसैलाई कोरोना पोजेटिभ नदेखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले वताउँछ । भोजपुरका अन्य पालिकाहरुमा भोजपुर नगरपालिकामा २६, राम प्रसाद राई गाउँपाकिालमा २२, हतुवागढीमा १८, आमचोकमा ९, पौवादुम्मामा ३, अरुणमा २ र टेम्के मैयुंगमा १ जना संक्रमित रहेकाछन् ।
भोजपुरका १ सय २२ जना संक्रमितको जिल्लामै उपचार भईरहेको छ । जिल्ला वाहिर २ जनालाई उपचारको लागि पठाईएको छ भने संस्थागत आईसोलेसन मा ३ जना रहेकाछन् । २ जना संक्रमितको जिल्ला वाहिर उपचार भईरहेको छ । भोजपुरका २ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् । भोजपुर नगरपालिकाका १ जनाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वस्थ्य कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ ।